Aadaa – Page 5 – siifsiin
Bara durii mucaa tokkotuu ture jedhama . Isaas maatiin isaa gaaf-tokko re’oota bobbaasi tiksi jedhaniin. Yeroo kana re’oota bobbaasee tiksuu deemee re’oota bobbaasee otuu eegaa jiruu hameenya tokko yaade. Kunis otuu sardiidni re’oota isaa jalaa hin tuqin sobaan iyyee namoota rifachiisuu baraade. Yeroo kana ka’ee akkana jedhe “U, U, U!” Maaloo na dhaqqabaa, maaloo na … Continue reading Mucaa fi Sardiida
Dur-dur sangoonni sadii fi waraabeessi tokko waliin jiraatu ture jedhama. Sangoota sadeen keessa tokko gurraacha, lammaffaan burree fi sadaffaan ammo adii ture. Sangoonni sadeen yeroo hunda marga yeroo dheedanii fi bishaanis yammuu dhugan waliin socho’aa turan. Tokkummaa cimaa waan qabaniif jidduu isaanii diinni karaa galee miidhaa irraan gahu argachuu hin dandeenye. Cimina tokkummaa isaanitiin dhufe … Continue reading Sangoota Sadii fi Bineensa